स्थानिय बासिन्दाहरुले खानेपानी संस्थाको हाकिमलाई घेरे - newslinesnepal
प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७६, मंगलवार १६:००
बुटवल-बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ का स्थानिय बासिन्दाहरुले मंगलबार खानेपानी संस्था बुटवलका हाकिमलाई घेराउ गरेका छन् ।
सुख्खानगरमा दैनिक खानेपानी नआउने गरेको र आएपनि धमिलो पानी आएपछि वडाका स्थानियहरु गुनासो लगेर खानेपानी संस्था बुटवलको कार्यालयमा पुगेका थिए ।
स्थानियहरुले सुख्खानगरमा दिनुपर्ने पानी कर्मचारी र जनप्रतिनिधीको आदेशमा अन्य वडालाई दिएको भन्दै उनीहरुले संस्थानका कार्यालय प्रमुख ईन्जिनियर बुद्धरत्न मर्हजनलाई घेराउन गरेका हुन ।
सुख्खानगरका स्थानिय बासीहरुले तत्काल खानेपानीको समस्या समधान नभए खानेपानी पाईपनै निकाल्दिने चेतावनी समेत दिएका छन् । सुख्खानगरका स्थानिय राधेश्यामराज भण्डारीले हिउदोको समयमा भन्दा पनि बढि खानेपानी समस्या अहिले भएको बताए ।
बुटवल–८ मा २ हजार ५ सय घरधुरी छन् । बुटवल–८ सुख्खानगरमा लामो समयदेखि खानेपानीको समस्या रहेको छ । सुख्खानगर संगै जोडिएको दिपनगरमा भने खानेपानी दैनिक रुपमा आएको भन्दै स्थानियहरुले सवैको मिलेमोतोमा वडा नं. ८ लाई खानेपानी नदिएको बताए ।
एक महिना अघि बुटवलको सडक डिभिजन परिसरमा उपमहानगरपालिकाकै पहलमा बोरिङ गाडिएको थियो । बोरिङ गाडेपछि आएको पानीले सुख्खानगरमा खानेपानीको समस्या टर्ने विश्वास गरेका जनताले सो पानी दिपनगरमा लगेपछि थप आक्रोशित बनेका हुन ।
खानेपानी संस्थाका कार्यालयका प्रमुख ईन्जिनियर बुद्धरत्न महर्जनले बुटवलका अझै एक दुई स्थानमा बोरिङ गाडेर समस्याको समधान गर्ने बताए ।-butwalonline.com
भोली विहानैदेखि काठमाडौंका सडकमा गाडि चलाउन नपाइने,
पुरुष क्रिकेटमा नेपाल विजयी
पौडीबाज गौरिका सिंहले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा दोस्रो स्वर्ण
पुरुष व्यक्तिगत गल्फतर्फ नेपालका सुवास तामाङले स्वर्ण पदक